ओलिम्पिक टर्च पुग्ने शहरहरु - BBC News नेपाली
ओलिम्पिक टर्च पुग्ने शहरहरु
18 मे 2012
बृटेनको ल्याण्ड्स एन्डबाट शुरु भएर ७० दिनसम्म ओलिम्पिक टर्च पुग्ने प्रमुख आकर्षण स्थलहरुको तस्वीरहरु
ग्रीसमा प्रज्वलित ओलिम्पिक ज्योति १८ मे २०१२ मा संयुक्त अधिराज्य आई पुग्नेछ।भोलि पल्टदेखि ८ हजार मानिसले ७० दिनको टर्च रिले १,००० गाउँ,शहर र नगरमा पु-याउनेछन्। तस्वीर: लोकोग/भिजिटबृटेन.कम
पहिलो दिन, १९ मे - ल्यान्ड्स एन्ड, कोर्नवल, इङ्ग्ल्याण्ड। इङ्ग्ल्याण्डको कोर्नवल स्थित ल्यान्ड्स एन्डमा ओलम्पियाबाट ल्याइएको ज्योतिबाट पहिलो टर्च प्रज्वलन हुनेछ। टर्च रिले शुरु गर्न यो अति सुन्दर प्रकृतिको कोखलाई रोजिएको छ। तस्वीर : भिजिटबृटेन.कम
५ औं दिन, २३ मे। बाथ, इङ्ग्ल्याण्ड। रोमन बाथका लागि प्रख्यात, युनेस्को बिश्व संपदा स्थल, बाथ शहर कलाकौशलको लागि पनि प्रसिद्ध छ। तस्वीर : भिजिटबृटेन.कम
११ औं दिन , २९ मे - स्नोडोनिया राष्ट्रिय पार्क, वेल्स। माउन्ट स्नोडोनको चुचुरो समुद्र सतह भन्दा लगभग ३,५६० फिट माथि रहेकोले यो वेल्स र इङ्ग्ल्याण्डको सबभन्दा अग्लो पहाड हो।एउटा लालटिनमा राखेर ज्योतिलाई चुचुरोमा पु-याइनेछ। तस्वीर : भिजिटबृटेन.कम
१३ औं दिन, ३१ मे। जोर्डेल ब्याङ्क, चेसाइर, इङ्ग्ल्याण्ड। यहां रहेको लभेल दूरबीन बिश्वकै एउटा ठूलो रेडियो दूरबीन हो।टर्च बोक्ने मानिस यहाँ सन् १९५७ मा निर्मित बिशाल दूरबीनमाथि चढ्नेछन्। तस्वीर : भिजिटबृटेन.कम
१४ औं दिन, १ जुन। क्रस्बी समुद्री किनार, इङ्ग्ल्याण्ड। यहाँ झण्डै दुई माइलको समुद्री किनारमा एक सय वटा मानव आकृतिहरु भेटिन्छन् र तिनकै आँखा मुनिबाट ओलिम्पिक टर्च अघि बढ्नेछ। तस्वीर : भिजिटबृटेन.कम
१५ औं दिन, २ जुन। लिभरपुल,इङ्ग्ल्याण्ड। मनमोहक समुद्री किनार भएको लिभरपुल शहर बिट्ल्सको गृह शहर र लिभरपुल फुटबल क्लबले गर्दा झन् परिचित छ। तस्वीर : भिजिटबृटेन.कम
१५ औं दिन, २ जुन। आइल अफ म्यान, इङ्ग्ल्याण्ड। यो टापूमा हरेक बर्ष टुरिष्ट ट्रोफी "टीटी" मोटर रेस हुने गर्दछ। ज्योतिलाई साइड कारमा राखेर लगिनेछ।
१७ औं दिन, ४ जुन। जायन्ट्स कज्वे, उत्तरी आयरलाण्ड। एक अर्कासंग जोडिएका ४०,००० चट्टानहरु रहेको उत्तरी आयरलाण्डको यो स्थान, सन् १९८६ मा देशको पहिलो बिश्व संपदा स्थलमा सूचीकृत भएको थियो। तस्वीर : भिजिटबृटेन.कम
१९ औं दिन, ६ जुन। गणतन्त्र आयरलाण्डको राजधानी डब्लीनको एक हजार बर्ष पुरानो इतिहास छ। एउटा सानो भाइकिङ बस्तीबाट यो शहर चहलपहलले भरीपूर्ण राजधानीमा परिणत भएको छ। तस्वीर: जीम लिन्वुड
२२ औं दिन, ९ जुन - इन्भरनेस, स्कटल्याण्ड। यो संयुक्त अधिराज्यको सबभन्दा उत्तर तर्फको एउटा मनोरम शहर हो। तस्वीर : भिजिटबृटेन.कम
२६ औं दिन, १२ जुन - एडिनबरा, स्कटल्याण्ड। एडिनबरा क्यासल रहेको स्कटीश राजधानीमा ओलिम्पिक टर्चको स्वागत गरिनेछ। तस्वीर : भिजिटबृटेन.कम
२९ औं दिन, १६ जुन - गेट्सहेड, इङ्ग्ल्याण्ड। न्युक्यासल नजिकै रहेको गेट्सहेडमा एन्थोनी गोर्ल्मीको एन्जल अफ द नर्थ नामक २०० टन इस्पातबाट बनेको २० मिटर अग्लो र ५४ मिटर चौडा बास्तुशिल्प रहेको छ। तस्वीर: बोनिटा सुरापुत्र
२९ औं दिन, १६ जुन - हाड्रियन्स पर्खाल, हाउसस्टेड्सको नजीक, इङ्ग्ल्याण्ड। रोमन सम्राट हाड्रियनको शासन ताका सन् १२२ मा निर्माण गरिएको यो पर्खाल, रोमन साम्राज्यको सबभन्दा सुरक्षायुक्त १२० किलोमिटरको सीमा थियो र पर्खालको मुख्यतया मध्य भाग अझै पनि बाँकी छ। तस्वीर : भिजिटबृटेन.कम
३४ औं दिन, २१ जुन - विन्डरमिर, इङ्ग्ल्याण्ड। लेक डिस्ट्रीक्टमा ज्योतिलाई स्टिमरमा राखेर लगिनेछ। तस्वीर : भिजिटबृटेन.कम
४१ औं दिन, २८ जुन - नटिङघम। रबिन हुडको कथासंग जोडिएको यो स्थानमा भनिन्छ, रबिन हुड शेरवुड जंगलमा बस्दथे र धनीहरुबाट लुट्र गरीबहरुमा बाँड्दथे। तस्वीर: डेभिड टेलफोर्ड
४३ औं दिन, ३० जुन - ब्ल्याक कन्ट्री लिभिङ म्युजियम, डुड्ली, इङ्गल्याण्ड। औध्योगीक बृटेनको परम्परागत सीपको सम्मान स्वरुप खडा गरीएका यहाँका भवनहरुको कलाकौशल सह्राहनीय छ। टर्च बोक्नेहरुले नहर डुङ्गा र ट्राममा यात्रा गर्नेछन्। तस्वीर : जो हेफरनन्
४४ औं दिन, १ जुलाई - स्ट्राटफोर्ड अपन एभन, इङ्ग्ल्याण्ड। ८०० बर्षको इतिहास भएको नगर, जहाँ प्रसिद्ध कवि तथा नाटककार विलियम सेक्सपियरको जन्म भएको थियो। तस्वीर : भिजिटबृटेन.कम
५० औं दिन, ७ जुलाई - क्याम्ब्रिज, इङ्ग्ल्याण्ड। बिश्व प्रसिद्ध युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिजको शहर। ओलिम्पिक टर्चलाई ट्रिनिटी कलेजको प्रसिद्ध ग्रेट कोर्ट रनमा लगिनेछ ।तस्वीर : भिजिटबृटेन.कम
५२ औं दिन, ९ जुलाई - अक्सफोर्ड,इङ्ग्ल्याण्ड। इतिहास र संपदाको धनी, विन्सटन चर्चिलको जन्मस्थल,युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्डको शहर।। तस्वीर : भिजिटबृटेन.कम
५५ औं दिन, १२ जुलाई - स्टोनहेज, विल्टशायर, इङ्ग्ल्याण्ड। यी ढुंगाहरु ४,००० देखि ५,००० बर्ष पुरानो भएको बिश्वास लिइन्छ र यो स्थानलाई सन् १९८६ मा बिश्व संपदा सूचीमा थपिएको थियो। तस्वीर : भिजिटबृटेन.कम
५८ औं दिन, १५ जुलाई - पोर्ट्समोथ, इङ्ग्ल्याण्ड। यो अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाह शहर नोर्मन्डी, फ्रान्समा डी-डे ल्याण्डीङको नौसैनिक कारवाही लगायत महत्वपूर्ण एतिहासिक घटनाहरुको साक्षी रहेको छ। तस्वीर : भिजिटबृटेन.कम
६१ औं दिन, १८ जुलाई - डोभर, इङ्ग्ल्याण्ड। सेता चट्टानहरुका लागि प्रख्यात यो स्थललाई " बृटेन प्रवेशद्वार " पनि भन्ने गरिन्छ।
६४ औं दिन, २६ जुलाई - लण्डन, इङ्ग्ल्याण्ड। अन्तत टर्च राजधानीमा आइ पुग्नेछ र ६ दिनसम्म बिभिन्न ठाउँहरु हुँदै लण्डनको केन्द्रमा रहेको बिश्व प्रसिद्ध वेस्टमिन्स्टरमा पुग्नेछ, जहाँ हाउस अफ पार्लियामेन्ट र बिग बेन जस्ता प्रसद्धि आकर्षण स्थलहरु छन्। तस्वीर : भिजिटबृटेन.कम
७० औं दिन, २७ जुलाई - ओलिम्पिक रंगशाला, स्ट्राटफोर्ड, पूर्व लण्डन। ओलिम्पिक रंगशालामा एथलेटिक्स र प्यारालिम्पिक्स एथलेटिक्स लगायत लण्डन ओलिम्पिक्स २०१२ को उद्घाटन र समापन समारोहहरु हुनेछन्। तस्वीर: लोकोग/एन्थोनी चार्लटन
बिहानैदेखि चुनावी चहलपहल
7 डिसेम्बर 2017
मतदान केन्द्रमा चहलपहल
6 डिसेम्बर 2017
नमस्कार! नमस्कार!! नमस्कार!!!
4 डिसेम्बर 2017